Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, John 12
Nepali New Revised Version, John 12
1 निस्‍तार-चाड़को छ दिनअघि येशू बेथानियामा आउनुभयो। त्‍यहाँ लाजरस बस्‍थे, जसलाई येशूले मृतकबाट जीवित पार्नुभएको थियो।
2 तिनीहरूले उहाँको निम्‍ति त्‍यहाँ बेलुकीको भोजन तयार गरे। मार्थाले सेवा-टहल गर्थिन्‌, अनि लाजरसचाहिँ उहाँसँगै खान बस्‍नेहरूमध्‍ये एक जना थिए।
3 तब मरियमले आधा लिटर जति कीमती जटामसीको सुगन्‍धित अत्तर ल्‍याएर येशूका पाउमा मलिन्‌, अनि उहाँका पाउ आफ्‍ना केशले पुछिन्‌, र अत्तरको बास्‍नाले घर भरियो।
4 तर उहाँका चेलाहरूमध्‍ये एक जना, अर्थात्‌ उहाँलाई पक्राउन खोज्‍ने यहूदा इस्‍करियोतले भन्‍यो,
5 “यो अत्तर तीन सय चाँदीका सिक्‍कामा बेचेर त्‍यो रकम गरीबहरूलाई दिए हुँदैनथ्‍यो?”
6 तर त्‍यसले गरीबहरूको ख्‍याल राखेर यो भनेको थिएन, किनकि त्‍यो चोर थियो, र पैसाको थैलो त्‍यसैले राख्‍थ्‍यो, अनि त्‍यहाँबाट चोर्ने गर्थ्‍यो।
7 येशूले भन्‍नुभयो,  “यिनलाई केही नभन, मेरो दफन-दिनको लागि यिनलाई त्‍यो राखिछोड्‌न देऊ।
8  किनभने गरीबहरू सधैँ तिमीहरूसँग हुन्‍छन्‌, तर म त सधैँ तिमीहरूसँग हुन्‍नँ।”
9 यहूदीहरूको एउटा ठूलो भीड़ले उहाँ त्‍यहाँ हुनुहुन्‍छ भन्‍ने थाहा पायो, र येशूको खातिरमा मात्र होइन, तर उहाँले मृतकबाट जीवित पार्नुभएको लाजरसलाई पनि हेर्न भनी तिनीहरू आएका थिए।
10 यसैले मुख्‍य पूजाहारीहरूले लाजरसलाई पनि मार्ने मतो गरे।
11 किनभने तिनैले गर्दा यहूदीहरूमध्‍ये धेरै जना छुटिएर गई येशूमाथि विश्‍वास गर्न लागेका थिए।
12 भोलिपल्‍ट चाड़मा आउने ठूलो भीड़ले येशू यरूशलेममा आउँदैहुनुहुन्‍छ भन्‍ने सुन्‍यो,
13 र मानिसहरू खजूरका हाँगाहरू लिएर उहाँलाई स्‍वागत गर्न कराउँदै निस्‍के, “होसन्‍ना! धन्‍य परमप्रभुको नाउँमा आउने इस्राएलका राजा!”
14 अनि गधाको एउटा बछेड़ो भेट्टाएर येशू त्‍यसमाथि चढ्‌नुभयो, जस्‍तो लेखिएको छ,
15 “सियोनकी छोरी, नडराऊ। हेर, तिम्रा राजा गधाको बछेड़ामाथि सवार भएर आउँदैहुनुहुन्‍छ।”
16 यी कुराहरू उहाँका चेलाहरूले पहिले बुझेनन्‌। तर येशूको महिमा भएपछि यी कुरा उहाँको विषयमा लेखिएका थिए, र यी काम उहाँको निम्‍ति तिनीहरूले गरेका हुन्‌ भन्‍ने तिनीहरूले सम्‍झे।
17 उहाँले लाजरसलाई चिहानबाट बोलाएर मृतकबाट जीवित पार्नुहुँदा उहाँका साथमा हुने भीड़का मानिसहरूले उहाँको गवाही दिई नै रहे।
18 उहाँले यो चिन्‍ह गर्नुभएको थियो भनी सुनेका हुनाले पनि भीड उहाँलाई भेट्‌न गएको थियो।
19 फरिसीहरूले तब एक-अर्कालाई भन्‍न लागे, “हेर, तिमीहरूबाट केही हुने होइन। देख्‍तछौ, संसारै त्‍यसको पछि लागिसक्‍यो!”
20 चाड़मा आराधना गर्न जानेहरूमध्‍ये कोही-कोही ग्रीकहरू पनि थिए।
21 तिनीहरू गालीलको बेथसेदा निवासी फिलिपकहाँ आएर यसो भनेर बिन्‍ती गरे, “हजूर, हामी येशूलाई भेट्‌न चाहन्‍छौ।”
22 फिलिपले गएर अन्‍द्रियासलाई भने, र अन्‍द्रियास र फिलिप गएर येशूलाई भने।
23 येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो,  “मानिसको पुत्रको महिमित हुने समय आइपुगेको छ।
24  साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, गहूँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्‍यो एउटै रहन्‍छ। तर त्‍यो मर्‍यो भने त्‍यसले धेरै फल फलाउँछ।
25  आफ्‍नो प्राणको मोह गर्नेले त्‍यो गुमाउँछ, तर आफ्‍नो प्राणलाई यस संसारमा तुच्‍छ ठान्‍नेले चाहिँ अनन्‍त जीवनको लागि त्‍यो सुरक्षित राख्‍छ।
26  कसैले मेरो सेवा गर्छ भने त्‍यसले मलाई पछ्याओस्‌ र म जहाँ छु, मेरो सेवक पनि त्‍यहाँ हुनेछ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने पिताले त्‍यसको कदर गर्नुहुनेछ।
27  “अब मेरो प्राण व्‍याकुल भएको छ, र म के भनूँ? ‘हे पिता, मलाई यस घड़ीबाट बचाउनुहोस्‌’? होइन, यसै कारणले नै म यस घड़ीसम्‍म आइपुगेको छु।
28  हे पिता, तपाईंका नाउँको महिमा गर्नुहोस्‌।” तब स्‍वर्गबाट यस्‍तो एउटा आवाज आयो, “मैले त्‍यो महिमा गरेको छु, र फेरि गर्नेछु।”
29 त्‍यहाँ खड़ा भएको भीड़ले यो सुनेर भन्‍यो, “यो मेघ गर्जन हो!” अरूहरूले भने, “स्‍वर्गदूत उनीसँग बोलेका हुन्‌!”
30 येशूले जवाफ दिनुभयो,  “यो आवाज मेरो निम्‍ति भएको होइन, तर तिमीहरूका निम्‍ति हो।
31  अब यस संसारको न्‍याय हुन्‍छ। यस संसारको शासक बाहिर फालिनेछ।
32  अनि जब म पृथ्‍वीबाट उचालिन्‍छु, म सबै मानिसलाई आफूतिर खिँच्‍नेछु।”
33 उहाँको मृत्‍यु कुन प्रकारले हुने हो, सो सङ्केत दिनलाई उहाँले यसो भन्‍नुभएको थियो।
34 भीड़ले उहाँलाई सोध्‍यो, “ख्रीष्‍ट सदासर्वदा रहनुहुन्‍छ भन्‍ने व्‍यवस्‍थाबाट हामीले सुनेका छौं। तपाईं कसरी भन्‍न सक्‍नुहुन्‍छ, मानिसको पुत्र उचालिनैपर्छ? यो मानिसको पुत्रचाहिँ को हो?”
35 येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो,  “अझ अलि बेरसम्‍म ज्‍योति तिमीहरूसँग छ। ज्‍योति तिमीहरूसँग छउञ्‍जेल हिँड्‌डुल गर, ताकि अन्‍धकारले तिमीहरूलाई नढाकोस्‌। कोही अन्‍धकारमा हिँड्‌डुल गर्छ भने, त्‍यसले आफू कहाँ गइरहेछु, सो थाहा पाउँदैन।
36  जबसम्‍म ज्‍योति तिमीहरूसँग छ ज्‍योतिमा विश्‍वास गर, र तिमीहरू ज्‍योतिका सन्‍तान होओ।” यी कुरा भन्‍नुभएपछि, येशू त्‍यहाँबाट जानुभयो, र तिनीहरूबाट लुकेर बस्‍नुभयो।
37 उहाँले तिनीहरूका सामुन्‍ने यतिका चिन्‍हहरू गर्नुभएको थियो, तापनि तिनीहरूले उहाँमाथि विश्‍वास गरेनन्‌।
38 यो आवश्‍यक थियो, कि यशैया अगमवक्ताको वचन पूरा होस्‌, “हे परमप्रभु, हाम्रो सन्‍देश कसले विश्‍वास गर्‍यो? अनि परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो?”
39 यसकारण तिनीहरूले विश्‍वास गर्न सकेनन्‌, किनभने यशैयाले फेरि यसो भनेका छन्‌,
40 “उहाँले तिनीहरूका आँखा बन्‍द गरिदिनुभएको छ, र तिनीहरूका हृदय कठोर पारिदिनुभएको छ, यसरी तिनीहरूले आँखाले नदेखून्‌, अनि हृदयले नबुझून्‌, नत्रता तिनीहरू फर्कनेछन्‌ र मैले तिनीहरूलाई निको पार्नुपर्छ।”
41 यशैयाले यी कुरा भने, किनकि तिनले उहाँको महिमा देखे, र उहाँको विषयमा भने।
42 तरै पनि शासकहरूमध्‍ये धेरैले उहाँमाथि विश्‍वास गरे, तर फरिसीहरूको डरले गर्दा, र तिनीहरूले सभाघरबाट निकालिदिन्‍छन्‌ भन्‍ने डरले त्‍यो स्‍वीकार गरेनन्‌।
43 किनभने परमेश्‍वरको प्रशंसाभन्‍दा मानिसको प्रशंसा तिनीहरू बढ़ी रुचाउँथे।
44 येशूले उच्‍च स्‍वरले भन्‍नुभयो,  “मलाई विश्‍वास गर्नेले मलाई होइन, तर मलाई पठाउनुहुनेमाथि विश्‍वास गर्दछ।
45  जसले मलाई देख्‍तछ, त्‍यसले मलाई पठाउनुहुनेलाई देख्‍तछ।
46  म संसारमा ज्‍योति भएर आएको छु, ताकि ममाथि विश्‍वास गर्ने अन्‍धकारमा नरहोस्‌।
47  “कसैले मेरा वाणी सुन्‍छ, र ती पालन गर्दैन भने, म त्‍यसको न्‍याय गर्दिनँ। किनभने म संसारको न्‍याय गर्न आएको होइनँ, तर संसारलाई बचाउन आएको हुँ।
48  मलाई इन्‍कार गर्ने र मेरा वाणी ग्रहण नगर्नेको लागि एक जना न्‍यायाधीश छन्‌। जो वचन मैले बोलें त्‍यसैले अन्‍त्‍यको दिनमा त्‍यसको न्‍याय गर्नेछ।
49  किनभने मैले आफ्‍नै तर्फबाट बोलिनँ, तर मैले के भन्‍नुपर्ने हो, र के बोल्‍नुपर्ने हो, मलाई पठाउनुहुने पिता आफैले मलाई आज्ञा दिनुभएको छ।
50  म जान्‍दछु, कि उहाँको आज्ञा अनन्‍त जीवन हो। यसकारण म जे बोल्‍दछु, पिताले मलाई भन्‍नुभएअनुसार बोल्‍दछु।”
John 11 Choose Book & Chapter John 13